फेक भिडियो देखाएर जब १५ वर्षका आर्यनलाई भाई अबरामको ‘पिता’ भनेपछि…! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान अहिले जेल जीवन विताइरहेका छन् । शुक्रबार मुम्बइस्थित किला अदालतल जमानत खारेज गरेपछि उनी अहिले जेल चलान भएका हुन् ।
उनलाई आर्थर रोड जेलमा राखिएको छ । आर्यनलाई मुम्बईबाट गोवा जाँदै गरेको क्रुजमा भेटिएको लागुऔषधको मामिलामा आइतबार पक्राउ गरिएको थियो ।
आर्यन पक्राउ परेपछि बलिउडका कलाकारले उनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट् गरेका छन् । भने, भारतीय सञ्चार माध्यमले आर्यनसँग जोडिएका प्रसंगहरुलाई समाचार बनाएका छन् ।
आर्यन पक्राउ परेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले विभिन्न समाचार बनाइरहेका छन् । शुक्रबार आर्यनको आमा गौरीको जन्म दिन परेको थियो । उनलाई पहिला गाजासहित विमानस्थलमा पक्रिएको तर बाहिर नल्याएको जस्ता समाचार बाहिर आइरहेको छ ।
यसैबीच, आर्यन र उनका भाइ अबरामको विषयमा एक प्रसंग जोड्दैछौँ । आर्यन र अबरामबीच १५ वर्षको उमेर अन्तर रहेको छ । आर्यनको जन्म सन् १९९७ मा भएको थियो भने सुहानाको जन्म २००० मा भएको थियो । त्यसपछि १३ वर्षपछि मात्रै शाहरुखले अर्को सन्तान बनाएका थिए । १५ वर्षको अन्तरका कारण आर्यनलाई अबरामका पिता भनेर चर्चा गरियो ।
सन् १०१७ मा टेडएक्स टकमा शाहरुखले भनेका थिए, ‘चार वर्ष पहिले मेरी पत्नी गौरी र मैले तेस्रो बच्चा बनाउने निर्णय लिएका थियौँ । त्यो समय मानिसहरु मेरो सानो छोरा आर्यनको बच्चा भएको दाबी गरिरहेका थिए । जबकी त्यतिबेला आर्यन जम्मा १५ वर्षको थियो । आर्यनको युरोपमा भएको फेक भिडियो देखाएर अबराम आर्यनको छोरा भएको दाबी गरिरहेका थिए ।’
शाहरुखले उक्त अफवाहका कारण आर्यन निकै चिन्तित भएको बताएका थिए । आर्यन उक्त समाचारले निकै बिचलित भएका थिए । उनी सबैलाई युरोपको ड्राइभिङ लाइसेन्स नभएको स्पष्टिकरण दिँदै हिँड्थे । शाहरुख र गौरीको तेस्रो बच्चा अबराम सरोगेसीमार्फत २०१३ मा जन्मिएका थिए । उनी प्रिम्याच्युर जन्मिएका थिए ।एजेन्सी
शाहरुखकी पत्नी गौरी लागुपदार्थसहित भेटिएकी थिइन् एयरपोर्टमा !
बलिउड अभिनेता शाहरुख खान भन्ने वित्तिकै नचिन्ने कमै होलान् शाहरुख खानकी पत्नी गौरी खान इन्टेरियर